Sida loo dar SRT Cinwaan Faylal ay si AVI on Mac / Win (Windows 8 ka mid ah)
> Resource > Video > Sida loo dar SRT Cinwaan Faylal ay si AVI ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)
Soo bixi tan ah .srt files Cinwaan ayna qorshaynayaan in ay ku darto SRT in AVI, laakiin aadan aqoon sida loo wada midowdo AVI SRT? Ha welwelin. Tani waxay halkan article aad u muujinaysaa sida ay si fudud Cudarada SRT in avi files si faahfaahsan. Marka loo abuuray AVI la subtitles SRT, aad fahmi karto oo wuxuu ku raaxaysan video yaabka fiican. Sida xaqiiqada ah, in aadan dareemi doonaa xumaaday marka aad dhegaysato wada hadal aan la fahmi karin in aad no-subtitles AVI gudbiyo wax ka badan.
1. AVI files aan subtitles
3. Qalab kaa caawinaya in aad ku darto SRT in AVI - Video Converter
App waxa uu leeyahay Win version dadka isticmaala Windows (Windows 8 taageeray), iyo version Mac Mac dadka isticmaala. Just dooro version saxda ah si ay u soo bixi oo ku xidh. Ogow in ay taageeri karaan faylasha Cinwaan la .ass iyo .ssa magaca kordhin file, marka laga reebo .srt.
Hoos waxaa ku qoran tilmaan ku salaysan madal Windows. Dabcan, hadii aad tahay qof user Mac ah (Snow Leopard, OS X Libaaxa ka mid ahaa), hagaha kale faahfaahsan oo ku saabsan ku daray subtitles SRT in avi files: User Guide of Video Converter u Mac .
Talaabada 1: Orod this app iyo soo dejinta AVI files in aad rabto in aad ku darto subtitles SRT
Marka socda app this, aad u baahan tahay si ay u dajiyaan doonayay files AVI aad. Si tan loo sameeyo, waxaad u tagi kartaa "Beddelaan"> "Add Faylal ay" ka menu ugu weyn ee ay caleenta iyo shuban files AVI. Sidoo kale, waxaad si toos ah u soo jiidi kartaa files bartilmaameedka barnaamijka.
Talaabada 2: Hubi AVI sida qaab wax soo saarka
Waa in aad ku qaadi bidhaamaysa icon Qaabka si aad u aragto haddii qaab wax soo saarka la doorto sida AVI. Haddii aan, aad leedahay si aad riix "Qaabka Output" icon in ay arbushin ilaa suuqa kala qaab wax soo saarka iyo ka dibna tag "qaab"> "Video"> "AVI".
Tallaabo 3: Ku dar SRT in AVI
Hit item video in ay leeg- ah iyo riix "Edit" button ka dambeeya in la galo suuqa kala tafatirka ay. Markaasuu ku dhufatey "Cinwaan" tab, sax ah "+" button in la furo dariishadaha hoos-hoos Xiisaha in browser your computer iyo shuban SRT faylasha Cinwaan aad rabto. Markii wax walba la sameeyo, kaliya ku dhacay "OK".
Talaabada 4: Beddelaan SRT in AVI in Windows (Windows 10 ka mid ah)
Hit button diinta ku darto avi SR files.When diinta la dhammeeyo, waxaad ka heli kartaa XAREYNIN cusub oo aad subtitles wuxuu curyaamin ku dahaadhnaa video. la soco in haddii doonayaan badbaadin qaabab kale, dooro doonayo video qaab talaabo 2.
OGV in AVI: Sida loo Beddelaan OGV in AVI si fudud oo dhaqso